အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် DAT SP LOW SMELL
View : 962
အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် DAT SP LOW SMELL, အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော်, စပရေးကော်, ကော်
ဖေါ်ပြချက်များ။ ။ သန့်ရှင်သည့်အဆောက်အအုံနှင့်အသုံးပြုသူသို့အန္တရာယ်ကင်းသောအသုံးပြုမှုအစီအစဉ်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူဖြစ်သည်။ ဧရိယာများတွင် အချိန်အကန့်သတ်ရှိခြင်း နှင့် အလျင်အမြန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
1. ကော်ကပ်သည့်ပစ္စည်း ခြောက်ခြောက်ကရင်ပါ။ ဖုန်များ, ဆီများ, အဆီများ (နှင့်) ဂျာရပီ မဲ့ပါ။
2. ပစ္စည်းပေတွင် SP-LS ကော်ကို ဘီး (သို့) သံလက်ဖြင့် နှစ်ဘက်ကပ်ပါ။
3. ပစ္စည်းအပေါက်ဘဝနှင့်အညီ ကော်ခြောက်ရန်7– 25 မိနစ်လောက် စောင့်ထားပါ။
4. ကော်ကောင်းစွာကပ်ရန် ကော်ပါသည့်ပစ္စည်းကို ပုံမှန်စွာနှိပ့်ပါ။
5. အတိုအစလောင်းရန် တင်နာ DAT Thinner (T 559) ကို သုံးပါ။
6. ကော်ကောင်းကောင်းကပ်ရန်4မာရီလောက် ထားပါ။
- 12 Kilograms
- ကလေးငယ်မှ အနီးနီးမထားရ။
- အအေးခြောက်သည့်နေရာတွင် ထိန်းထားပါ။ နေရောင်ရှည်, အပူ, မီးလောင်းလွယ်နေရာတွင် မထိန်းရ။
- သုံးစွဲပြီးလျှင် တင်းကျပ်စွာပါ။
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။
DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO.,LTD. (M)
အနံ့မပြင်သည့်ကော် DAT GP-LOW SMELL ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော် ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
အနံ့မပြင်းသည့် ရောဘာကော် DAT ကုန်ပို့လွှာရယူရန်